Ururka Daacish Oo Gebi Ahaanba Laga Qabsaday Raqa | Gaaroodinet
Ururka Daacish Oo Gebi Ahaanba Laga Qabsaday Raqa
October 17, 2017 - Written by Admin
Syria(GRN) Xoogagga uu Mareykanka taageero ee ciidamada dimuquraadiga ee Suuriya ayaa sheegaya in haatan gebi ahaanba la wareegeen magaalada Raqa oo xarun u ahaan jirtay kooxda la baxday Dowladda Islaamka.
Gudaha magaalada ayaa la sheegayaa in ay ku hareen tiro yar oo ka tirsan mintidiinta kooxdani, gaar ahaanna meel u dhow cusbitalka guud iyo garoonka kubadda cagta ee Raqa.
Dagaal ayaa laga soo warramayaa in uu haatan istaagay waxaana ciidamada dimuquraadiga ee Suuriya sheegayaan in ay la wareegeen fagaaraha Naciim ee hadda ka hor kooxda dowladda Islaamka ay meel fagaare ah dad ku dishay.
Ciidamada qabsaday magaalada ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay shaaciyaan in rasmiyan ay la wareegeen magaaladaasi.
In kabadan 3000 oo qof oo rayid ah ayaa dhawaan isaga qaxay magaalada Raqa.
Maalintii sabtida ahayd ayaa 100 ka tirsan mintidiinta Daacish waxaa loo ogolaaday in ay magaalada isaga baxaan iyaga iyo qoysaskooda balse waxaan ilaa haatan la ogayn halka ay jaan iyo cirib dhigeen dagaalyahannadii kooxdan ee ajaaniibta ahaa.